Ukuhlukaniswa Kwe-Ultrasonic Kwamaseli - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-Ultrasonication iyindlela ephumelelayo yokuqhekanisa izakhiwo zamaseli. Lo mphumela ungasetshenziselwa ukukhishwa kwezinto ezisetshenziswayo ezingaphakathi, isib. Isitashi esivela ku-matrix yeseli.
I-Ultrasonication ikhiqiza ukushintshwa kwamagagasi aphezulu nokucindezela okuphansi ngaphansi ketshezi ebonakalayo. Ngesikhathi umjikelezo ophansi ocindezelayo, amagagasi e-ultrasonic enza ama-bubbles amancane okugcoba emanzini awela phansi ngokuhlukumeza ngesikhathi somjikelezo ophezulu wokucindezela. Lesi simo sibizwa cavitation. I-implosion ye-cavitation bubble ibangele amabutho anamandla ase-hydrodynamic shear.
Ukuchithwa kwe-ultrasonic yezinhlaka zeselula
Amandla we-shear angakwazi ukuhlukanisa izinto ezinamathebhu, izinto zokwabelana nge-cellulosic zibe izinhlayiya ezinhle futhi aphule izindonga zesakhiwo seseli. Lokhu ikhishwa okungaphezulu kwezinto zangaphakathi neselula, njenge-isitashi noma ushukela endaweni engetshezi. Ngaphezu kwalokho lokho okubonakalayo kwendonga yeselula kuphulwa zibe izidumbu ezincane.
Lo mphumela ungasetshenziselwa Ukuvuthwa, ukugaya kanye nezinye izinqubo zokuguqulwa zendaba eziphilayo. Ngemuva kokugaya nokugaya, i-ultrasonication yenza okungaphezulu kwezinto zangaphakathi-isib. Isitashi kanye nama-debris odongeni lweseli iyatholakala kuma-enzyme okuguqula isitashi zibe ushukela. Iyakwenza futhi ukwandisa indawo evezwe ezinzymeni ngesikhathi sokuphuza noma ukuhlanjululwa. Lokhu kwenzeka ngokujwayelekile ukwandisa ijubane nokukhiqiza imvubelo yokuvutshelwa nezinye izinqubo zokuguqulwa, isib ukwandisa ukukhiqizwa kwe-ethanol kusuka ku-biomass.
Hlola ukwahlukaniswa kwe-Ultrasonic kalula kunoma isiphi isikali
Isilinganiso sebhu labangu-1mL kuya ku-approx. 5L isib I-UP400St ene-22mm sonotrode
ibhentshi phezulu kwesilinganiso. 0.1 kuya ku-20L / min isib I-UIP1000hdT ene-34mm sonotrode ne-flowcell
Isilinganiso sokukhiqiza esukela ku-20L / min isib UIP4000 noma UIP16000
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ungathanda ukuthola ulwazi oluthe xaxa mayelana nokusetshenziswa kwamadivaysi e-ultrasonic ngenhloso yokwehlukaniswa kwamaseli. Sizojabula ukukusiza.
Cela imininingwane eminingi yokuqhekeka kwamaseli!
Ukususa indlela yokulwa namagciwane e-ultrasound